လမ်းခွဲချိန်မှာ အမျိုးသားတွေက ပိုခံစားရတယ်လို့ စစ်တမ်းလေ့လာချက်ကဖော်ပြ | Duwun
လမ်းခွဲဖို့ စခဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချန်ရစ်ခံရသူပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။
လူအများစုသိချင်ကြတဲ့ မေးခွန်းက အသည်းကွဲတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူတွေက ပိုပြီးခံစားရသလဲ၊ ပိုခံစားတတ်ကြသလဲဆိုတာပါပဲ။
လမ်းခွဲဖို့စခဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချန်ရစ်ခံရသူပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် လမ်းခွဲချိန်မှာ ဘယ်သူကပိုပြီး နာကျင်ခံစားရတတ်သလဲ၊ ချန်ခဲ့သူလား? ကျန်ခဲ့သူလား? ဒါမှမဟုတ် ကောင်လေးလား? ကောင်မလေးလား?
တကယ်တမ်းတော့ လမ်းခွဲချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အသိကို စတင်ခံစားမိတာနဲ့ ကောင်လေးရော၊ ကောင်မလေးပါ ရိုလာကိုစတာလို အတက်အကျမြန်တဲ့ခံစားချက်ကိုအတူတူခံစားကြရပါတယ်။ ခံစားချက် အနိမ့်အမြင့်၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၊ ကြောက်စိတ်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေအားလုံးဟာ လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်အဆင့်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရာမှာတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးအကြားမှာ ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။
Journal of Health and Social Behavior ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် စစ်တမ်းတစ်ရပ်က စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ အသက်၁၈နှစ်ကနေ ၂၃နှစ်အကြားအမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀၀) ဦးကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာမှာ လမ်းခွဲချိန်မှာ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပြီးခံစားရတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဆိုပါ အချက်အလက်ကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ရာမှာ လမ်းခွဲခြင်းက အမျိုးသားတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုနဲ့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုတွေကို ခံစားရစေပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူဆွေးမှုကိုလည်း ပိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းက အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ကို သံသယဖြစ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကောင်မလေးတွေကရော ဘယ်လိုခံစားရတတ်သလဲ။
အသည်းကွဲခြင်းက မိန်းကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်
ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြတ်တောက်သွားချိန်မှာ မိန်းကလေးအချို့မှာ ယာယီနှလုံးရောဂါပြဿနာမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ဆေးပညာမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့် နှလုံးကြွက်သားတွေ အားနည်းသွားတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေဟာ အသည်းကွဲနေချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်၊သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အားပေးကူညီမှုကိုပိုရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကတော့ သိက္ခာနဲ့မာနကြောင့် အသည်းကွဲခံစားချက်ကို မျှဝေတာမျိုးလုပ်လေ့မရှိကြပါဘူး။
လမ်းခွဲချိန်တိုင်းက ချစ်သူတိုင်းအတွက် ဝမ်းနည်းစရာပါ
တကယ်တမ်းတော့ လမ်းခွဲချိန်ဟာစုံတွဲတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ ဘယ်သူက ပိုခံစားရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲ မတူညီတဲ့ပုံစံ၊ မတူညီတဲ့အတွေးတွေနဲ့ နှစ်ဦးစလုံးဝမ်းနည်းခံစားရတတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေက ရည်းစားဟောင်းကို ဘယ်တစ်ယောက်နဲ့ အတူရှိနေမလဲဆိုတာ တွေးပြီးခံစားတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေးပုံစံကတော့ တစ်မျိုးပါ။ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လမ်းခွဲချိန်မှာ ဘယ်သူပိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုတွေးနေတာထက် အတူရှိနေချိန်မှာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပြီး ဆက်ဆံရေးတည်မြဲအောင် တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။